Ciidamo Itoobiyan ah oo gaaray Buulo Barde (Maxey halkaas u tageen?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamo Itoobiyan ah oo gaaray Buulo Barde (Maxey halkaas u tageen?)
Mareeg.com: Ciidamo fara badan oo Itoobiyaan, watana gaadiidka dagaalka, islamarkaana qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa gaaray degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan.
Ciidamadan ayaa la sheegay iney Buulo Barde u tageen gudbinta raashin gargaar ah, kaasoo la doonayo in la gaarsiiyo degmada Maxaas ee isla gobolka Hiiraan iyo degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud.
Duqa degmada Buulo-barde, Cismaan Geeddi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidammo Itoobiyaan ah oo fara badan ay gaareen degmada ayna gudbin doonaan raashin ay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ugu talo-gashay in loo qaybiyo dadka ku nool degmooyinka Maxaas iyo Ceelbuur.
“Waxaa degmada soo gaaray ciidammo Itoobiyaan ah oo ka tirsan AMISOM oo gudbin doona raashin gargaar ah oo ku socda Buulo-barde, dhawaanahan ayaana la filayaa inay gaadiidka sida raashinkan gargaarka ah ka kexeeyaan degmada,” ayuu yiri Cismaan Geeddi.
Sidoo kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in ciidamadan aysan qayb ka ahayn kuwo loogu talo-galay inay degmada ka howlgalaan, laakiinse howshoodu ay tahay inay baabuurta gargaarka sida kexeeyaan.
“Gargaarkan waa mid loogu talo-galay in lagu caawiyo dadka shacabka ah ee ku sugan degmooyinka go’doominta ay gelisay Al-shabaab, innagana waxaa naga go’an inaan sidii loogu talo-galay u qaybinno,” ayuu hadalkiisa ku daray duqa Buulo-barde.
Raashinkaas gargaarka ah oo laga qaaday Muqdisho waxaa degmada Buulo Barde gaarsiiyey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa ka socda dalka Burundi.